"Iarhente yokomeleza ikhonkrithi yomphezulu" yezixhobo zokugquma ngobushushu
Ikhonkrithi yokomeleza umphezulu wohlobo oluthile lwesinyibilikisi sokuqinisa amanzi. Inembonakalo engenambala kunye nebala. Kukho izinto ezinamacandelo amabini kunye nezinto zecandelo elinye kwimarike. Ukuqiniswa kwesiphumo sezinto ezibini kungcono ....
“Ikhonkrithi enobunzima obulula” yezixhobo zokwakha ezintsha
Ikhonkrithi ye-Lightweight aggregate (LGC), enye yezinto zokwakha ezintsha, yikhonkrithi engasindi eyenziwe ngobunzima obunobunzima obungaphantsi kwe-1900kg / m3, ekwabizwa ngokuba yi-porous aggregate lightweight concrete. Ikhonkrithi enobunzima obungaphantsi ineempawu ezingasindiyo ...
Ingqungquthela yetekhnoloji yokhuseleko lwekhonkrithi iqonga le-818 liyavula
Kwi-2018, imveliso yekhonkrithi yesizwe ifikelele kwi-2.35 yezigidigidi zeekyubhi, kwaye ngo-2019, yafikelela kwi-cubic metres ezigidigidi ezi-2,4, inyuke ngonyaka-malunga ne-3.46%. Ukusetyenziswa kwekhonkrithi e-China kubekwe kwihlabathi ngaphezulu kweminyaka engama-30. Ngo-2019, Highwa iyonke China ...